Qaar ka tirsan gawaarida ay ka boobeen ciiidamada dowladda iyo kuwa Itoobiyaanka shacabka ku nool Muqdisho iyo deegaanada ku dhow dhow ayaa la sheegay in ay gaareen xuduudda Itoobiya ay la leedahay Soomaaliya iyo degaannada Puntland iyo ciidamo ay hoggaaminayaa wasiirku xigeenka dowladda iyo taliayah aagga 1aad oo la filayo in ay dhawaan gaaraan Kismaayo. Ruunkinet 08/05/07
Wararka ka immanaya Feer Feer ayaa ku waramaya in ay xuduudka ay la leedahay Somaaliya dowladda Itoobiya gaareen gawaari dowr ah oo laga bililiqeystay ama laga xoogay dad rayid ah oo ku nool magaalada Muqdisho iyo degaannada ku dhow dhow.
Gawaaridan oo sida la sheegay iy qaateen qaar ka tirsan ciidamada Itoobiya iyo kuwa dowladda federaalka ah ayaa lagu arkay degaanno ka tirsan Puntland.
Warka ayaa intaasi ku daraya in kumbiyuutarada (computers), Sat. Dishes, iyo qabab kale oo ay ka mid yihiin rikoorada iyo TV-da oo laga xoogay dad rayid ah loo qaaday dalka Itoobiya iyo gobollada Puntland.
Warar lagu kasoon yahay oo ka imaanaya magaalada Muqdisho iyo Afgooye ayaa ku waramaya in 72 saac ee la soo dhaafay ciidamada Itoobiya ay ku dheceen in ka kabadan 15 baabuur oo ah kuwa yar yar ayagoo kala dagayay dad u kala gooshayay Xamar iyo Afgooye.
Dhanka kale, Warar aan la xaqiiin ayaa ku waramaha in wasiir ku xigeenka dowladda federaalka ah iyo taliyaha aagga 1aad ay dhawaan u dhaqaaqi doonaan magaalada Kismaayo.
Salaad Cali Jeelle iyo Afguduud ayaa la sheegay in ay horay u sii raaci doonaan ciidamo Itoobiyaan ah iyo kuwa dowladda federaalka ah si ay xukunka Kismaayo ugu dhiinaan Col. Cabdirisaaq Afguduud.
Sidoo kale, maleeshiya taageersan wasiirka gaashaan dhigga ayaa la sheegay in ay isu diyaarinayaa in ay weerar kaga hortagaan ciidamada la filayo in ay ku duulaan Kimaayo dhawaan.